သတင်းများ – အမြင့်အမြတ်ဦးပိုင်ငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဗ် Customize. Excellent ကကက်ဘိနက်.
ကျွမ်းကျင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲငါးဇယားသမုဒ္ဒရာညျရှငျဘုရငျ3Plus အားကျား Avengers
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-12-04 17:12:29
ကျွမ်းကျင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲငါးဇယားသမုဒ္ဒရာညျရှငျဘုရငျ3စနစ်ငါး Go ကို၏ Plus အားကျား Avengers မိတ်ဆက်ခြင်း - စနစ်ကညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆငျ့. အဆိုပါလေးသာမှုအဆင့်ကို parameter သည်လေးသာမှုကိုထိန်းညှိဖို့ HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ငါးဖမ်းဂိမ်းပါဝင်သည်, ငါးမုဆိုးဂိမ်း, ငါးစားပွဲဂိမ်းစက်ကို, ငါးမုဆိုးလောင်းကစားဂိမ်းစက်ကို, စသည်တို့ကို. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
စက်ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာဘုရင်ကငါးမျှား3ငါး၏နက်ရှိုင်းသောကြံ့မိတ်ဆက်ခြင်း၏ Plus အားမာစတာ
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-08-22 17:08:20
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ငါးဖမ်းစက်ပါဝင်သည်, ငါးအမဲလိုက်စက်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း,အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းဂိမ်း, စသည်တို့ကို. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. စက်ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာဘုရင်ကငါးမျှား3စနစ်ငါးဘမျးသှားမညျ၏နက်ရှိုင်းသောကြံ့မိတ်ဆက်ခြင်း၏ Plus အားမာစတာ - စနစ်ကညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆငျ့. အဆိုပါလေးသာမှုအဆင့်ကို parameter သည်လေးသာမှုကိုထိန်းညှိဖို့ HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ. သငျသညျငါးအမဲလိုက်စက်အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း, ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်း, ငါးပစ်ခတ်မှု gamesetc စက်, စသည်တို့ကို, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ.
အဆိုပါသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အား
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-08-14 09:08:47
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ငါးဂိမ်းစက်တွေပါဝင်သည်, ငါး Arcade ဂိမ်း , ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်ကို, စသည်တို့ကို. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. အဆိုပါသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အားလင့်ခ်ချိတ်ခြင်းစနစ်အထိခွင့်ပြု 1000 Arcade ငါး Connect အတူတကွမှဂိမ်းများဇယားသေနတ်ပစ်. link ကိုစနစ်ကဖြည့်စွက်4ယင်းနှင့်ဆက်စပ်ငါးဂိမ်းစက်အားလုံးကိုတိုးတက်ရေးပါတီထီပေါက်. သင်သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကအကြောင်းပိုမိုသိရန်လိုပါလျှင်3Plus အား , သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်ကို, Arcade ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်ကို, ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်း,စသည်တို့ကို, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ.
ထိပ်တန်းငါးဂိမ်း : ငါး Arcade ဂိမ်း
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-07-23 18:07:19
ကျနော်တို့ငါးဖမ်းစက်နှင့်ငါးဖမ်းဂိမ်းတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ငါးဖမ်းစက်ပါဝင်သည်, ငါးအမဲလိုက်စက်တွေ, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း, အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းဂိမ်း. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. နောက်တစ်ခု, ငါအမှထိပ်တန်းငါးဂိမ်းမိတ်ဆက်ပေးဦးမည်：သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အားဂဏန်း Avengers သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3စနစ်ငါး Go ကို၏ Plus အားဂဏန်း Avengers မိတ်ဆက်ခြင်း - စနစ်ကညှိနှိုင်းမှု - အလေးသာမှုအဆငျ့. အဆိုပါလေးသာမှုအဆင့်ကို parameter သည်လေးသာမှုကိုထိန်းညှိဖို့ HIGH သို့မဟုတ် LOW အဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ. သငျသညျငါးအမဲလိုက်စက်အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါလျှင်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း, ငါးမုဆိုး Arcade ဂိမ်း, ငါးပစ်ခတ်မှု gamesetc စက်, စသည်တို့ကို, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ.
ငါးဂိမ်းသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အား Aquaman ဘုံ
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-07-13 09:07:37
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ. ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥစ္စာဓနများ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ငါးဖမ်းစက်ပါဝင်သည်, ငါးအမဲလိုက်စက်, ငါးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း,အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းဂိမ်း, စသည်တို့ကို. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. အဆိုပါအသစ်လွင်ဆုံးငါးဂိမ်းစားပွဲတင်သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကဂိမ်းစီးရီး: သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အား Aquaman ဘုံ Aquaman ဘုံဟာသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျငါးဂိမ်းစီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ငါးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ရှိပါတယ် 30 ဖမ်းရန်ငါး, တန်ဖိုးရှိကွဲပြားခြားနားသောအချက်တန်ဖိုးများများမှာအားလုံးသော. အဆိုပါကြီးတွေအကြီးအကဲတွေ: Aquaman နှင့် Mera. သင်သည်ထိုသူတို့ဖမ်းတစ်ချိန်ကသင်ပိုမိုရမှတ်များရလိမ့်မယ်. ငါးကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းသမုဒ္ဒရာရှင်ဘုရင်ကို3Plus အား Aquaman ဘုံ , 2-10 အမြားအပွားအဖြစ်ဖမ်းရန်တတ်နိုင်သမျှအရူးကစားသမား ...
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-07-06 10:07:40
အဆိုပါငါးဖမ်းစက်ငါးဖမ်းဂိမ်းများအတွက်တင်ဆောင်လာသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်. ဈေးကွက်ထဲမှာ, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်လလူတို့အဘို့လူလေးယောက်တစ်ငါးဖမ်းစက်နှင့်တစ်ဦးငါးဖမ်းစက်သို့ကွဲပြား. ကစားသမားမျက်နှာမှမျိုးစုံ Modes သာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ play နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကးအမျိုးမျိုးအတွက်ငါးဖမ်း၏စိတ်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, ငါးဖမ်းစက်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးရှိပါတယ်? 1. ငါးဖမ်းအဆုံးမဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်： ဒီငါးဖမ်းစက်အမျိုးအစားကိုအစောပိုင်းကသည်ထင်ရှား. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ငါးနှင့်ငါးအဆုံးမဲ့ငါးဖမ်းစက်ပါဝင်သည်, Fisher ငါးဖမ်းစက်, ကို double-ခေါင်းနှစ်လုံးငါးမန်း Fisher, Fisher ပင်ဂွင်းကို double-တန်းဖြစ်၏, ကို double-တန်းဖြစ်၏ Fisher, ကို double-လက်စွပ်မိကျောင်းငါးဖမ်းသမား, ကို double-အနီရောင်ကဏန်းငါးဖမ်းစက်, အရူးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်ငါးဖမ်းစက်, အလွန်ကောင်းသောငါးဖမ်းစက်, ငါးနှင့်ငါးစက်လိုက်ဖမ်း, တံခါးကိုသဲငါးဖမ်းစက်, Shenlong ဒဏ္ဍာရီ ...
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-07-01 17:07:54
အဆိုပါငါးဖမ်းစက်စျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. အဆိုပါငါးဖမ်းစက်တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံကလူလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပြီးလေး-လူတစ်ဦးနှင့်ခြောက်လူတစ်ဦးစက်တွေသို့ကွဲပြား. ကစားသမားသက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်ရဖို့ပုံထဲကအမျိုးမျိုးသောငါးမှငါးဖမ်းသေနတ်ထိမှန်နိုင်ပါတယ်. ဂိမ်းထဲမှာ, ငါးဖမ်းရမှတ်များအပြင်, သင်သည်လည်းစူပါလက်နက်တွေဖမ်းနိုင်ပါတယ်, ငါး, ပုလဲသေတ္တာများ, စသည်တို့ကို, ဒါကြောင့်ကစားသမားပိုပြီးပျော်စရာမွေ့လျော်ကြောင်း. ငါးဖမ်းစက်ငါးဖမ်းကျွမ်းကျင်မှု 1. Xiaoguang ငါးရမှတ်: 1 အမှတ် / ဆောင်းပါး. အနီရောင်နှင့်အဝါရောင်သေးငယ်တဲ့အလင်းငါး, အုပျစုထဲမှာပေါ်လာ, ဖမ်းမိရန်မလွယ်ကူ. Beginners အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့သူ့ကိုအသုံးပြုလို. ဒါပေါ့, အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သူကြီးတွေငါးဘို့မကြာခဏလုပ်ကွက်ကျည်ဆံတွေ. ထိုကွောငျ့, အများအပြားငါးဖမ်းသမား ...
18 Jul.2019 ဂျကာတာအင်ဒိုနီးရှားအပန်းဖြေ & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, အဆိုပါဂိမ်းအဝန်းအတူတကွလာအဘယ်မှာရှိ
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2019-04-11 01:04:18
ရွှင်မြူးခြင်း & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, အဆိုပါဂိမ်းအဝန်းအတူတကွလာအဘယ်မှာရှိ TAS အပန်းဖြေဖို့အပေါက်ဂိမ်းလောင်းကစားအသစ်သောငါးဖမ်းဂိမ်းစက်နှင့်ကာစီနို၏သက်တော်-ယူပြီးခင်းကျင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည် & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ, လူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအရောအနှောထည့်သွင်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွက်ဂိမ်းစက်ပြင်နှင့်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယိ. အပန်းဖြေအတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းဖြစ်လာဖို့စေမယ့်အစု & အပန်းဖြေကုန်စည်ပြပွဲ.
ကမ္ဘောဒီးယားကအာရှဖျော်ဖြေမှု & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်စည်ပြပွဲ, သင့်ရဲ့ဂိမ်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမောင်းနှင်
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2018-11-28 17:11:28
အာရှဖျော်ဖြေမှု & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်စည်ပြပွဲ, ကားမောင်းသင်တို့၏ဂိမ်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ TAS အသစ်ကထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးအသက်ရှူ-ယူပြီးခင်းကျင်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်(ဂိမ်းစက်နှင့်အခြားလောင်းကစားဂိမ်းငါးမျှား) အသက်ကမ္ဘောဒီးယားမှ, လူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအရောအနှောထည့်သွင်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွက်ဂိမ်းစက်ပြင်နှင့်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယိ. ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစုစုမှသည်ရေးဆွဲနောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်-ဦးဆောင်ဂိမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အကြီးမားဆုံးအစဉ်အဆက်ခင်းကျင်းပြသတဲ့တစေ့တစောင်းပူဇော်ပါလိမ့်မယ်.
Orlando တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ IAAPA ဆွဲဆောင်မှုကုန်စည်ပြပွဲ, သငျသညျမြားအတှကျလောင်းကစားဂိမ်း Now ကို
admin ရဲ့အပေါ်အားဖြင့် 2018-11-13 17:11:22
IAAPA ဆွဲဆောင်မှုကုန်စည်ပြပွဲ, လောင်းကစားဂိမ်းသည်သင်ယခု TAS IAAPA Orlando တွင်အသစ်ငါးဖမ်းဂိမ်းစက်တစ်ခုအသက်ရှူ-ယူပြီးခင်းကျင်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, လူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအရောအနှောထည့်သွင်း, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအတွက်ဂိမ်းစက်ပြင်နှင့်ဆန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယိ. ကျနော်တို့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, လုံခွုံမှု, နှင့်အမြတ်အစွန်းငါးဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းနေစဉ်.